မင်းဘယ်သူ့ကို Twittering နေတာလဲ | Martech Zone
မင်းဘယ်သူ့ကို Twittering နေတာလဲ
စနေနေ့, စက်တင်ဘာလ 20, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါ၏အအစာကျွေးခြင်းတွင်ယနေ့နံနက်တစ် ဦး ပေါ်လာတယ် တိုင် ဒါကကျွန်မရဲ့အာရုံကိုဆွဲဆောင်ခဲ့တယ်၊ ငါပို့စ်ကိုမှတဆင့်ပြီးတာနဲ့, သို့သော်, ငါစိတ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်အမှန်တကယ်တည်ထောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအမှန်တကယ်မရှိသောကြောင့် နားထောင်သူ။ အဲဒီအစား, ငါရိုးရှင်းစွာတစ် ဦး ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်ပတ်သက်။ post တစ်ခုနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ခဲ့သည် တွစ်တာ အကောင့်။
တွစ်တာအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်းကသင့်အားလူတို့၏အမှန်တရားကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေနိုင်မည်မဟုတ်ပါ ဟု သင်၊ သင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ ထုတ်ကုန်များနှင့်ကုမ္ပဏီများအကြောင်း။ ရှေးရှေးသင်တို့နှင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုသာဖြစ်သည် ဖြတ်. ဤ ထူးခြားသောအလယ်အလတ်.
Micro-Blog Listeners တွေကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ရမလဲ
တကယ်လို့ 'နားထောင်သူ' ကိုတပ်ဆင်ရန်၊ သင် Google ကိုသွားပြီးသင်ရှာဖွေနေတဲ့ဝေါဟာရကိုရှာဖွေနိုင်သည် twitter ဥပမာအားဖြင့်“ microsoft ad” ကို twitter သို့ရှာဖွေခြင်းကိုပြသည်။
site: twitter.com "Microsoft ကြော်ငြာ"
site: friendfeed.com "Microsoft ကြော်ငြာ"
အကယ်၍ သင်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းလှမ်း။ သင်နှင့်သင်၏ဆက်သွယ်ရေးရှေးဟောင်းသုတေသနများကိုအမှန်တကယ်တုံ့ပြန်လိုပါက၊ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်သင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်ပါ။ Google ကသတိပေးချက် ဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ရန်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်နာမည်ကောင်းမန်နေဂျာတစ်ယောက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဂူဂဲလ်သတိပေးချက်များနှင့်စာသားသတိပေးချက်တောင်မှပြုလုပ်နိူင်ပြီး tweet ကိုတိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်လိမ့်မည်။
20:2008 pm တွင်စက်တင်ဘာ 9, 39 မှာ
ကောင်းပြီ Durh! ဒါဟာ လူအများစုအတွက် ထင်ရှားမယ်လို့ သင်ထင်ပါသလား။ သူတို့ twitter ကို "တကယ်" နားမလည်ပုံရသည်။
စက်တင်ဘာ 21, 2008 မှာ 10: 01 AM
မင်းပြောတာမှန်တယ် Jason အခြား site တွင် 'twitter listener' ကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်မှတ်စုကိုတွေ့သောအခါ၊ အမှန်တကယ် 'နားဆင်ရန်' အဓိပ္ပါယ်မရှိသောကြောင့် post ကိုရေးခဲ့ရပါသည်။
စက်တင်ဘာ 21, 2008 မှာ 8: 37 AM
Twitter မှာဖော်ပြထားတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေက ငါ့ကို ဘယ်လိုရှာပြီး တုံ့ပြန်နိုင်မလဲဆိုတာ အမြဲတွေးနေမိတယ်။ အခုမှသိတာ။ ကျေးဇူးပါ။
22:2008 pm တွင်စက်တင်ဘာ 2, 46 မှာ
မင်္ဂလာပါ Douglas .. လင့်ခ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Beth ၏ နားထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်အများစုကို စလိုက်ရှိုးတွင် အမှန်တကယ် ထည့်သွင်းထားသည်။ ပို့စ်၏ပထမပိုင်း၌၊ သူမသည် သင့်အား အကောင့်ဖွင့်နည်းကို ပြောပြပေးသည်၊ သို့သော် စလိုက်ရှိုးတွင် အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်းများနှင့် သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအချက်မှ သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သော အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မည်သို့နားထောင်ရမည်ကို စလိုက်ရှိုးတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။ အမြင်။
သူမသည် နားထောင်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းတို့ကို ရောနှောနေသည်မှာ သေချာသော်လည်း စလိုက်ရှိုးတွင် "နားထောင်နည်း" အကြံပြုချက်အချို့ရှိသည်။
22:2008 pm တွင်စက်တင်ဘာ 3, 48 မှာ
ဒါကိုသိအောင်ပြောပြတဲ့အတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးကို တောင်းပန်အပ်ပါတယ် ၊ စိတ်ပြောင်းသွားတယ်ထင်တယ် ။ 🙂 ငါပြန်ပြီး နားထောင်ဖို့ လိုပုံရတယ်။
24:2008 pm တွင်စက်တင်ဘာ 2, 21 မှာ
🙂 စိတ်မပူနဲ့နော်။ ပထမဆုံးဖတ်တုန်းကလည်း အံ့သြမိတယ်၊ ဒါပေမယ့် နောက်တော့ powerpoint ထဲကို ရောက်သွားခဲ့တယ်။ တစ်ချို့အရာတွေက ကောင်းတယ်။ Beth သည် အလွန်ထက်မြက်သော socmed ဧဝံဂေလိဆရာတစ်ဦးဖြစ်သည်။
28:2008 pm တွင်စက်တင်ဘာ 1, 51 မှာ
ပိုမိုလွယ်ကူသောနည်းလမ်းမှာ ယခင် Summize ကိုအသုံးပြုသည့် TweetBeep.com ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ http://search.twitter.com. ကျွန်ုပ်၏အမည်၏ စာလုံးပေါင်းမှားခြင်းအပါအဝင် မတူညီသောသော့ချက်စာလုံးအများအပြားကို စောင့်ကြည့်ရန် TweetBeep ကိုအသုံးပြုပါသည်။ 🙂
စိတ်ပါဝင်စားသူများအတွက်လည်း Slide တစ်ခုအတွက် ပြင်ဆင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Twitter သို့ မိတ်ဆက်ခြင်း။ ငါပေးပို့သောအရာ Atlanta Web Entrepreneurs ၏ မကြာသေးမီက Twitter တွေ့ဆုံပွဲ.
စက်တင်ဘာ 29, 2008 မှာ 9: 17 AM
Mike၊ အဲဒါ အရမ်းကောင်းတယ်။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည်မှာ Tweetbeep သည် ထိုရှာဖွေရေးစာပိုဒ်များကို ဖမ်းယူရန်အတွက် ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သော အင်္ဂါရပ်မျိုးမရှိပေ။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် သင့်ကုမ္ပဏီအကြောင်းပြောနေပါက တစ်နာရီကျော်သွားပါက- အလွန်နောက်ကျသွားနိုင်သည်။
မနေ့ က နေ့စဉ် လင့်ခ်တွေ မှာ ထည့်ခဲ့တယ်၊ ဖမ်းမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Blog Bloke - သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သော Blogger တစ်ဦးဖြစ်အောင် ကူညီပေးခြင်း။
10:2008 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 6, 06 တွင်
Twitter ရှာဖွေမှုရလဒ်များ သတင်းဖိဒ် (ညာဘက်အပေါ်ထောင့်) တွင် စာရင်းသွင်းရန် နှစ်သက်သည်-
ဒါမှ Google သတိပေးချက် အီးမေးလ်ကို စောင့်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်ရွေးချယ်ထားသော အချက်အလက်များကို အချိန်မရွေး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
10:2008 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 7, 11 တွင်
မင်းရဲ့အချိန်ဟာ အပြစ်ကင်းစင်ပါတယ် Bloke! အဲဒါ ငါ့ရဲ့ ဒီ post!
10:2008 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 9, 24 တွင်
အမြဲတမ်း သတို့သမီး.. ဘယ်တော့မှ သတို့သမီး မဟုတ်ဘူး 😉